Posted byUpdate Department July 17, 2019 July 17, 2019 Leaveacomment on सरकारी होस् या नीजिको कर्मचारी तलब लिन प्यान नम्बर अनिवार्य, अनलाईनबाट यसरी लिनुहोस्
आजदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष २०७६/७७ सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक बर्षसंगै अब तलब लिन सरकारले प्यान कार्ड (Permanent Account Number- PAN) अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था बमोजिम अब कुनै प्राईभेट कम्पनी, संस्था, फर्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना कुनैपनि व्यक्तिलाई तलब दिन पाउने छैन ।
नयाँ आर्थिक बर्षसंगै प्यान कार्ड नभएका कर्मचारीको तलब प्राईभेट कम्पनी, फर्म तथा निकायले खर्चको रुपमा देखाउन पाउने छैनन् । सरकारले कुनै पनि कर्मचारीलाई तलब दिँदा बैङ्क खातामार्फत् तलब दिनुपर्ने भएकाले प्यान अनिवार्य भएको हो । यसले सुरुवाती रुपमा ज्यालादारी रुपमा काम गर्दै आएका श्रमिकहरुलाई पनि वित्तियसंस्थासँग जोड्ने काम सरकारले गरेको छ । तर विराटनगर लगायत देशका अन्य स्थानमा यसको विरोध भैरहेको छ ।
४. अब तपाइको व्यक्तिगत विवरण माग्छ । सो अनुसार आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्नुहोस र Submit गर्नुहोस ।
कति कमाउँदा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ ? यस्तो छ सरकारले निर्धारण गरेको आयकर दर
काठमाडौँ । व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि राज्यका हरेक नागरिकले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ। जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ।
आर्थिक विधेक २०७६’ मा व्यवस्था गरिएको आयकरका दर
७ लाख माथि २० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले थप ३ लाख ९० हजार गरी ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ
Posted byUpdate Department July 17, 2019 July 17, 2019 Posted inसूचना/प्रविधि
आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको छ भने बुध ग्रहलाई पुजा गर्नुहोस्